Zimbabwe: Coach Gets Flack for Dropping Stars - allAfrica.com
Zimbabwe: Coach Gets Flack for Dropping Stars
The Warriors coach has come under fire for not including players who were part of Kaizer Chiefs' fine run for the South African Championship into the squad that will face Egypt.
Zimbabwe/Egypt: Pagels Resist Calls for Willard Katsande
Pagels Resist Calls for Willard Katsande in the team that will face Egypt and Guinea in next month's World Cup qualifiers. Read more »
Zimbabwe national soccer team 'The Warriors' (file photo).
WARRIORS assistant coach, Lloyd Mutasa, is happy with the strides made in the national team rebuilding exercise before they go in camp next week to start preparations for a series… Read more »
Zimbabwe: Quincy Antipas to Go Under the Knife
Zimbabwe Standard, 26 May 2013
Denmark based Warriors midfielder Quincy Antipas has been ruled out of next month's World Cup qualifier against Egypt due to an injury. Read more »
THE Zimbabwe national football team are not worried by the decision by Malawi to call their strongest squad for the international friendly match to be played in Blantyre this… Read more »